आईपीएल : दिल्ली र राजस्थान भिड्दै, सन्दीप पर्ने सम्भावना कति ? - Nepal Post Daily
आईपीएल : दिल्ली र राजस्थान भिड्दै, सन्दीप पर्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौं । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टोली दिल्ली क्यापीटल्सले आज राजस्थान रोयल्ससँग खेल्दैछ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को राउण्ड रोविन लिगको अन्तिम खेल राजस्थानसँग आफ्नै घरेलु मैदानमा खेल्दैछ । १३ खेलमा १६ अंक जोडेको दिल्ली ६ वर्षपछि पहिलो पटक प्लेअफमा पुगिसकेको छ भने राजस्थान लिगको छैठौं स्थानमा छ ।
११ अंकरहेको राजस्थानको प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना निकै कम छ । दिल्लसिँग जितेपनि १३ अंकमात्रै हुने राजस्थान भन्दा अगाडि एक खेल बाँकी रहँदा १२—१२ अंकसहित हैदरवाद र कोलकाता चौथो र पाँचौ स्थानमा छन् ।
दिल्लकिा लागि महत्वपूर्ण खेलाडी तथा आईपीएलका सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी कागिसो रबाडा टिममा नहुँदा भने केही हदसम्म दबाबमा रहनेछ । यस्तै, आइपीएलमा रन नियन्त्रण गर्न नसकेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आजको खेलमा टिममा स्थान पाउने सम्भावना कम छ ।
तरपनि अघिल्लो खेलमा सन्दीपको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका क्रिस मोरीस महँगा सावित भएका कारण सन्दीपले स्थान पाउने क्रिकेट विश्लेषकको आँकलन छ । सन्दीपले यो सिजनको आईपीएलमा खेलेका ८ खेलबाट ८ विकेट लिएका छन् ।
Previous articleराष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने – यो सरकार उहाँकै हो
Next articleफोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता, बन्यो समाजवादी पार्टी नेपाल